Daraasad kiis - Ka Soo Haajiridda Parse - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Daraasad Xaalad: U guurista WAALID
Horumarinta wali waxay ku jiraan jahwareer ku saabsan ku dhawaaqistii naxdinta lahayd ee Facebook lagu daboolayay Parse. Feejignaan ayaa ahayd horumarinta'doorashada koowaad marka aad ka hadlaysid gadaal. Waxay siisay adeegsi aad u fudud oo loo adeegsan karo nidaamka gadaashiisa kaas oo kugu kicin kara oo ku socon kara daqiiqado. Runtii waan ka mahadcelineynaa sida Parse u suurtagashay mobilada-marka hore kooxaha si ay u dhisaan barnaamijyada xawaaraha hillaaca. Laakiin hadda oo ay xidhan tahay, waa lama huraan in la tahriibo.
Waxaan ka caawinnay mid ka mid ah macmiilkeena inuu si fudud uga guuro Parse una dejiyo xal buuxa oo MongoDB ah.
Waxaan u samaynay macmiilka qalab mobile ku salaysan oo dhamaystiran - Paragoni LLC. Xalka waxaa la sameeyay iyadoo la isticmaalayo Parse sida dhabarka si loo ilaaliyo database iyo daruur code. Shuruuda macmiilku waxay ahayd in gabi ahaanba loo raro dhabarka dambe ee beddelka kale ee ugu wanaagsan ee Parse waqti degdeg ah oo aan waxyeellayn tayada iyo ammaanka. Ahaanshaha bixiye la aamini karo, NewGenApps ayaa loo shaqaaleeyay si loo dhiso xalkaan.
NewGenApps soo saaray xalka codsiga macruufka oo la marti qaaday ilo furan ku baar code serverka AWS Cloud. The ilo furan ikhtiyaarku wuxuu awood u siinayaa qaar ka mid ah astaamaha kala -goynta saldhig ahaan si loo dhiso xalka la habeeyay waxaanan adeegsanay Adeegyada AWS sida:
Noodh rakibay 4.3
Nooca MongoDB 2.6.X ama 3.0.X
Python 2.x ( Isticmaalayaasha Windows, 2.7.1 waa nooca loo baahan yahay)
AWS Mobile Analytics waayo, Analytics jiilka
Macaamiilku wuu faraxsan yahay maadaama aan soo jeedinay waxa ugu fiican ee tahriibka waxaanna ku qabannay guuritaan dhammaystiran muddo ka yar toddobaad. Macaamilku wuxuu horeyba ulashaqeeyey shaqooyin cusub wuxuuna na fiirinayaa hagitaanka teknolojiyada.